I-MeetingHero: Uhlelo Lokusebenza Lokukhiqiza Komhlangano | Martech Zone
I-MeetingHero: Uhlelo lokusebenza lokukhiqiza ukukhiqiza
NgoLwesibili, ngoJuni 10, i-2014 Douglas Karr
Abakhangisi baba nemihlangano ngaso sonke isikhathi njengama-ejensi… imihlangano iyisisekelo sempilo yokuhlela nokuhlela. Kepha imihlangano nayo ingakhiqiza ngendlela eyisimanga. Ngenkathi abantu abaningi befuna imihlangano ngaso sonke isikhathi, ngivame ukumelana nayo. Imihlangano iyakhokhisa futhi iyabiza. Kwesinye isikhathi ukwesaba kukhuthaza umhlangano lapho abantu befuna ukumboza izinqa zabo. Ngezinye izikhathi, imihlangano ikhiqiza umsebenzi omningi wethoni yize ungakaqedi okwamanje.
Ngisanda kubhala iposi ngibuza, Ingabe Igumbi Lemihlangano Elingenalutho Liyisibonakaliso Sokukhiqiza? futhi eminyakeni embalwa edlule ngaze ngakukhuluma lokho Imihlangano bekungukufa komkhiqizo waseMelika.
Bengingadlali ... ngangisanda kusula enkampanini enkulu lapho nganginamahora angama-30 + emihlangano masonto onke. Ngiyekile ukuya kunoma yimuphi umhlangano ongenanhloso, isizathu sokuthi ngibe khona, nohlelo lokusebenza. Imihlangano yami yehlela ehoreni noma amabili ngesonto futhi ngangikhiqiza kakhulu kunakuqala.
Bathi kukhona uhlelo lokusebenza lwayo yonke into, futhi manje kungenzeka ukuthi sibe nenye yokuhlangana komkhiqizo, UmhlanganoHero. I-MeetingHero kulula ukuyisebenzisa kunoma iyiphi ifoni, ithebhulethi kanye nekhompyutha ukuze ukwazi ukuthwebula imininingwane ebalulekile noma kunini.
Izici ZomhlanganoHero Faka
Thatha futhi uhlanganyele ku-Real-Time - Kulula ukusebenzisana nokuthatha umhlangano obucayi
imininingwane ukuze kuzwakale wonke umuntu futhi kungalahleki lutho.
Imihlangano Emifushane, Egxile - I-MeetingHero yenza kube lula kuwe nethimba lakho ukwakha, ukwabelana nokunamathela kuma-ajenda womhlangano ukuze nibe nezingxoxo ezigxile, ezikhiqizayo, nezindlela zokuthatha ezizuzisayo.
Shayela izinqumo eziningi - Ngokunikeza inani elifanele lesakhiwo ngesikhathi somhlangano wakho, i-MeetingHero isiza ukuqondisa iqembu lakho ekwenzeni izinqumo nasekuvumelaneni ngezinyathelo ezilandelayo.
Hlala unolwazi ngezifinyezo zomhlangano okwabelwana ngazo - Yonke imihlangano inokufinyelela okulula, okwabiwa ngokufingqiwe komhlangano, ukuze weqe emihlanganweni bese uhlala unolwazi.
Wonke Amanothi Wakho Wokuhlangana - I-MeetingHero ihlela wonke amanothi wakho womhlangano kuyo yonke imihlangano yakho ukuze ukhumbule kalula ukuthi ukhulume ngani, yiziphi izinqumo ozithathile nokuthi yini eshiywe ingaxazululiwe.
Ukuhlanganiswa kwekhalenda - I-MeetingHero ivumelanisa ne-Google Khalenda (eminye iyeza maduze), ukuze ukwazi ukudala nokumema abantu emihlanganweni ngendlela ohlale wenza ngayo, futhi usebenzise iMihlanganoHero ukuqinisekisa ukuthi leyo mihlangano ikhiqiza kakhulu futhi iyaheha.
Tags: uhlelo lokwenzauhlelo lokusebenzaikhalendaukuhlanganiswa kwekhalendangokubambisanaizinqumoikhalenda le-googlebehlanganaumhlanganoimihlanganouhlelo lokusebenza lweselula
Ukwehluleka Kwakho Ukuphendula Konakalisa Icebo Lakho Lezokuxhumana
Izinsika ezi-3 Zokumaketha
UJun 11, 2014 ngo-5: 55 AM
Imihlangano ingaba yesabekayo kwesinye isikhathi, ngiyakuqonda, ngokungangabazeki, kepha kungakhuthaza okuthile kobuciko kithi sonke ngesikhathi esisodwa,
Ngiphuma kweminye imihlangano ngiqabuleke impela. Angikaze ngisebenzise lolu hlelo lokusebenza kepha ngikuthola kunentshisekelo, ikakhulukazi ngiyayithanda ingxenye yokuthunyelwe kwakho enezici, ibekwe kahle. Okwamanje ngisebenzisa uhlelo lokusebenza olubizwa ngokuthi yi-The Meetings oluvela enkampanini okuthiwa i-Exquisitus, inezinto ongakaze uzicabange, ngiyayithanda ukuthi i-sync yayo ihlanganiswe nezinhlelo eziningi zokusebenza.
UJun 16, 2014 ngo-9: 44 AM
It iseyithuluzi elisha elihle kepha ngiyayithanda kakhulu ngoba ilula futhi iyasebenziseka. Kunezisekelo ezithile ongeke ukwazi ukuzenza (awukwazi ukususa “imihlangano” okungama-aphoyintimenti ekhalenda nje kuphela njengoba idonsa ngokuphelele ekuvumelanisweni kwekhalenda lakho) kepha iyithuluzi elihle impela.
Jun 16, 2014 ku-3: 34 PM
Ukuqondisisa okuhle Chris! Siyabonga ngokwabelana ngalolo lwazi. Ngicabanga ukuthi noma yini esiza isabelomali somhlangano kancane iyisinyathelo sendlela efanele!